प्रधानमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र :: Setopati
कुशल स्वास्थ्य लाभको कामना।
केही समय अगाडि मैले रिपब्लिकामा कोभिड-१९ आगमनको पुर्वसन्ध्यामा आत्तिहाल्नु नपर्ने तर चनाखो भई सम्पूर्ण हिसाबले सरकार तयार रहनुपर्ने राय प्रकट गरेको थिएँ।
लेखको मूल उदेश्य नेपालमा सार्वजनिक स्वास्थ्य र आर्थिक पक्ष दुवैको सम्पूर्ण रुपले तयार हुनुपर्ने दृष्टिकोण रहेको थियो। तर आजसम्म त्यस विषयमा तपाईको सरकार गम्भीर भई लागि परेको देखिन्न।
अनियन्त्रित प्रकोपको रुपमा देखापरेको यो प्रकोप संसारको सबै देशले गम्भीर चुनौतीको साथ सामना गरिरहेको जसको नियन्त्रण पनि हाम्रै हातमा छ। तपाईंले आफ्ना सहकर्मी, पार्टी, सल्लाहकारहरूद्वारा सुझाव गरिएका केही उपायहरू लागू गर्न खोज्नुभएको छ, जसको म आदर गर्दछु। यद्यपी ती कसरी अघि बढाइनु पर्थ्यो या बढाइँदै छ भन्नेमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रीको अभिव्यक्ति र कामले हामी सबै नागरिकलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ। कहिले घरमा पाउना आएर पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिन नभ्याउने त कहिले पिपिई दिन नसक्ने कुराले उनी यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन्। जसको फलस्वरूप सोसल मिडियामा यी हरफहरु अहिले निकै प्रचलित भएको छ।
मो भानुभक्त मन्त्री भैकन आज यस्तो।
कोभिड–१९ को उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि, पिपिई, परीक्षण आदिका लागि चाहिने सामाग्री खरिदमा तपाईका स्वास्थ्य मन्त्रीको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुने गरी सामाग्रीहरु खरिद गरेको पाइएको छ।
१९ प्रकारका सामाग्रीहरुको मूल्य सूची मिडियामा छ्यापछ्याप्ति भएको देख्नुभएकै होला। जस्तोकी अन्तर्राष्टिय बजारमा १ डलर ३० सेन्ट पर्ने मास्कलाई अमेरिकी डलर ७ खर्चिएको छ। ५०० सयभन्दा बढी कमिसन एउटै मास्कमा गएको छ। आफैं हिसाब गर्नुहोला, ८० हजार मास्कमा कति कमिसन भयो? यो भ्रष्टाचारको जवाफदेहीता तपाईको सरकारको कुन विभाग र कुन पदाधिकारीमा कहिले हुने?
लकडाउन पछि पुराना टेन्डर रद्द गरेर तीन घन्टाभित्र नयाँ कोटेसन दिन कम्पनीहरूलाई किन आह्वान गरियो? कोभिड-१९ सुरु भएको ६२ दिन मौन बसेर तीन घन्टाभित्र नयाँ प्रस्ताव मागेको सरकारले खासमा कसको सेवा गर्न खोजेको हो? सार्वजनिक खरिद ऐनले प्रतिस्पर्धा गराउन भन्छ।
प्रतिस्पर्धा गराउनका लागि नेपालसँग पर्याप्त समय थियो । तर, जानाजान इमर्जेन्सी खडा गरेर सामग्री खरिद गर्नु भ्रष्टाचार हो कि होइन? आज नागरिकले माग्दा र भोलि कुनै संवैधानिक निकायले प्रश्न सोधेमा तपाईको सरकार र तपाई जवाफदेही कसरी हुन सक्नुहुन्छ?
हुन त चौतर्फी आलोचना भएपछि ठेक्का रद्ध भयो तर भएको भ्रष्टाचारको हेक्का राख्नुहोस् र छानबिन गरेर तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिनुहोस्। महामारीको बेलामा भ्रष्टाचार मौलाउन दिएर देशलाई दोहोरो खतराबाट कृपया जोगाउनुहोस्।
म बिन्ति गर्छु, कृपया महामारीको बेलामा प्रेस अभिव्यक्ति तथा स्वन्त्रतामाथी हस्तक्षेप नगर्नुहोस्। हिजो मात्रै काठमाडौं प्रेसले छापेको ‘चीनबाट झिकाएका कमसल स्वास्थ्य सामग्रीको घोटाला प्रकरणमा सरकारका उच्च अधिकारीका आफन्त संलग्न’ शीर्षकको समाचार सामग्री हटाउन तपाईकै आईटी सल्लाहकारको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको विषयमा सम्पूर्ण सम्पादकहरुको ध्यानाकर्षण तथा आमनागरिक तपाईको सरकार विरुद्ध उभिए।
सिरान टेक्नोलोजिज प्रालि र एफवान सफ्ट विरुद्ध सबै जना खरो रुपमा उत्रिए। अनलाइन समाचार साइट बन्द गराउन प्रेस काउन्सिलले गरेको सिफारिस आफैंमा संविधानको मर्म विपरीत हो। हुन त तपाइको आईटी सल्लाहकारलाई सन् २०१८ को अक्टोबरमा आफ्नो निजी व्यवसायको प्रयोगको लागि निजी र संवेदनशील जानकारी लिई आफ्नो स्थान दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो।
त्यस्तै सोही वर्षको डिसेम्बरमा उनले प्रतिस्पर्धी बिड प्रक्रिया बिना विभिन्न सरकारी निकायमा प्रमुख आईटी सम्झौताहरू सुरक्षित गर्न आफ्नो पदको घोर दुरुपयोग गरिरहेको पाए। यद्यपि तपाई र तपाईको मन्त्रि मण्डल मौन नै रहेर टारिदिनुभयो।
सल्लाहकार र देखिने भूमिकामा परे तर यो प्रकरणको कारक राजनीतिक तहकै नहुनेमा दुईमत छैन। सिरान टेकलाई कस्ले त्यसो गर्न लगायो, आफ्नो आँटले मात्रै त्यति ठूलो गलत काम पक्कै पनि भएको हैन, कृपया केही गर्नुहोस्।
भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहिष्णुता भन्नु हुने तपाईको वचन कोभिड-१९ को विपत्तिमा समेत मौलाउन दिनुभयो। बोलीको हेक्का राख्छु भन्नु हुने तपाई सक्नुहुन्छ भने, त्यस्ता भ्रष्टचार र अनियमितता मच्चाई देशको ढुकुटी खोक्रो पार्नेलाई तत्काल कारबाही गरेर हामी सबै नागरिकको प्रिय बन्नुहोस् जसरी भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा आफ्नो अभिव्यक्तिले हुनु भएको थियो।
म तपाईलाई अनुरोध गर्दछु, क्वारेन्टाइन नेपालमा अति आवश्यक भए पनि अन्य उपायहरूसँगको तालमेलले मात्र यसको अर्थ राख्छ, जुन अझसम्म अपनाइएको छैन। वास्तवमा ती उपायहरू नगरेसम्म क्वारेन्टाइन प्रतिरोधात्मक पनि हुन सक्छ।
यो बेला राजधानी छाडेर मानिस गाउँमा जाँदैमा रोग नलाग्ने अड्कल बाजी गर्छन। गाउँमा नेपालको दक्षिणी भेगबाट खुल्ला सिमा हुँदै थुप्रै नेपालीहरु दिनानुदिन भित्रिनाले थप त्रास र भयावहक अवस्थाको कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ। तत्काल खुल्ला सिमा बन्द गर्न आह्वान गर्नुहोस्, र आएकालाई क्वरेन्टाइनमा राख्न निर्देशन दिनुहोस्।
यो बडादशैंझैँ सबै गाउँघरमा जम्मा भई खसी काट्ने, रक्सी खाने, जुवातास खेल्ने बेला होईन, कृपया चेतना फैलाउन खटाउनुहोस्। तिनले त झन् रोग फैलाउन सक्छन् किनकी तिनले विदेशबाट नेपालमा कोभिड-१९ रोग बोकेर आएका हुन सक्छन्। छ वटा मात्रै केश त हो नि भनेर ढुक्क नहुनुहोस्, बरु सम्भावित सबैलाई चेक गर्ने व्यवस्था गर्नुहोस्।
चैत्र ४ मा कतार हुँदै आएको प्लेनमा दुई जना संक्रमित भेटिसकेको छ, बाँकीलाई तत्काल खोजेर चेकजाँच गरी क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनुहोस्। उनीहरुले यतिका दिनसम्म कति जनालाई पो रोग सारिसके होलान्, यदि रोग ल्याएका भए, ढिला गर्दै नगर्नुहोस्।
यदि कुनै व्यक्तिले आफ्नो क्वारेन्टाइन तोडेर मास्कको प्रयोगबिना विशेषगरी धेरै मानिससँग सम्पर्क हुने सार्वजनिक ठाउँमा गएमा रोगको संक्रमण हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ। व्यवस्थित तथा आवश्यक सावधानीबिना बाहिर गएमा तिनीहरू रोगको संक्रमण हुने या भएकाले महामारी फैलाउन सक्छन्। तसर्थ, सुरक्षामा अझै कडाई गरिदिनुहोस्
म चाहन्छु कि म गलत हुँ, तर यदि हामी यो उपायलाई पूर्णरूपमा स्वीकार्दैनौँ भने अबको केही हप्तामा संक्रमणको संख्या नाटकीय रूपमा बढ्नेछ र मृत्युको संख्या पनि।
महामारीलाई रोकथाम गर्नका लागि एफएफपी मास्कहरू सर्वप्रथम सबै मेडिकल र अस्पतालका कर्मचारीहरूलाई, सफाई कर्मचारीदेखि लिएर विभाग प्रमुखसम्म उपलब्ध गराइनु पर्दछ र सम्पूर्ण देशको जनसंख्यालाई पनि। र यो लगाउन अनिवार्य हुनुपर्दछ। यो सरल उपाय, यदि पूर्णरूपमा लागू गरियो भने, निश्चित रूपमा छ हप्तामा महामारी रोकिनेछ।
म तपाईंलाई ढिला नगरी मास्कको उत्पादन गर्न नयाँ कारखानाको स्थापना गर्न आह्वान गर्दछु। यो सजिलै गर्न सकिन्छ। मुख छोप्ने मास्क बनाउनु पर्ने हो, मोटर, कम्प्युटर वा रोबट बनाउनु पर्ने होइन। यसको लागि तपाईको अर्थमन्त्रीले भविष्यवाणी गरेको महामारीको लागतको तुलनामा केही रकम पनि पर्ने छैन। यस्तो लगानी गर्न चुक्यौं भने म विश्वास गर्छु कि हामी ठुलो विपत्ति निम्त्याउँदै छौं।
म तपाईलाई बिन्ति गर्छु, चिकित्सा र अस्पताल क्षेत्रलाई थप मद्दत जति सक्दो चाँढो पुर्‍याउनुहोस्। उनीहरु पहिलेदेखि नै नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार र उन्नतको निम्ति पटकपटक आवाज उठाउँदै रुष्ट हुँदै आएका छन्। सानो कुरामा अल्झिने समय यो होइन, अति संयमित भएर परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल कदम चल्ने बेला हो। उनीहरुको सुरक्षाको सुनिश्चित गरिदिनुस्।
म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, गुडान र उडान सवारी बन्द गरी क्वारेन्टाईन समय समेत बढाउनु भएकोमा। जबसम्म हामी सबैले सुरक्षा अवरोधलाई स्वीकार गर्दैनौँ तबसम्म बढाउनुपर्छ। यदि आदेशको अवज्ञा गरी कुनै मानिस मास्क वा स्कार्फबिना बाहिर निस्केको देखिएको छ भने हामी डराउनुपर्छ किनकी आगामी केही दिनमा कोभिड-१९ केशको संख्यामा नाटकीय वृद्धि हुनेछ। केश आफैं आउने होइन, बाहिर निस्कन पूरै बन्द गर्न सकिएमा मात्रै हामी पूर्णरुपले सुरक्षित हुन सक्छौं।
म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, जापान, दक्षिण कोरिया र ताईवानको प्रतिक्रियाबाट हामी प्रेरित होँ। यी देशहरूले मास्कको व्यापक प्रयोगको साथ महामारीको नियन्त्रण गर्न सकेका छन्, जसले गर्दा उनीहरूको अर्थ व्यवस्थामा थोरै मात्रै सुस्तता आएको छ।
जापानमा ९० प्रतिशत जनसंख्या अहिले सार्वजनिक यातायातमा मास्क लगाउँछन्। त्यस्तै, उनीहरूको व्यक्तिगत र सामुहिक जिम्मेवारीको भावना हाम्रोभन्दा धेरै विकसित भएको छ। मार्च महिनाको लागि मात्र सरकारले ६०० मिलियन मास्क वितरण गर्यो। होटेल र यातायातमा लगभग सय प्रतिशत कर्मचारीले मास्क लगाउँछन्।
चीनमा पहिलोपटक कोरोना देखिएको ३१ डिसेम्बर अर्थात् १५ पुसमा हो । २३ जनवरी अर्थात् ९ माघमा वुहान लकडाउन भएपछि विश्वको ध्यानाकृष्ट भयो । त्यसयताका ६७ दिनसम्म नेपाल सरकार किन मौन बस्यो?
कोरोनाले चीनबाट दक्षिण कोरिया, जापान, इटाली हुँदै सिँगो युरोप र अमेरिका छुँदा संयोगले नेपालले असाधारण मौका पाएको थियो । त्यो मौकाको सदुपयोग तपाईको सरकारले के काम कुन गतिमा गर्‍यो ?
वैज्ञानिकहरूले ५६-६० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि श्वास ताप प्रयोग गरेर हुने फाइदाहरूको आँकलन गर्न अध्ययन सुरु गरेका छन् जुन सम्भावित समाधान विश्वमा यसभन्दा पहिले कहिल्यै परीक्षण गरिएको थिएन। यसले वैज्ञानिक अर्थ राख्छ जुन समाधानको अध्ययन गरौं।
यो पूर्ण रूपमा सम्भव र सुरक्षित देखाउँछ किनकी तिनले भाइरस संकुचनको जोखिम कम गर्दछ। त्यस्ता अनुसन्धानको सम्भावित चासोमा कुनै शंका गर्न सकिँदैन किनभने यदि साँस स्थापना प्रभावकारी सावित भयो भने हामी भाइरल श्वासप्रश्वासको घटनालाई सजिलै घटाउन सक्छौं।
म तपाइँलाई बिन्ति गर्छु, निवर्तमान परिस्थितिलाई चारै तिरबाट नियाल्नुहोस्। राज्य प्रमुखको रूपमा तपाईंको जिम्मेवारी यही हो जुन नेपालले गर्नसक्छ। जब यी चिज वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट स्पष्ट हुन्छ, हामी मानिसमा विश्वास राख्न सक्छौं।
तपाई नेपाली समाजलाई अरुको सम्मान र सहिष्णुता, सामूहिक सरसफाई र आधारभूत समानुभूतिको हिसाबले प्रगतिशील विखण्डनको लागि तपाईं जिम्मेदार हुनुहुन्न। यो लामो र क्रमिक प्रक्रिया हो जुन अन्य विशेषज्ञहरूले विश्लेषण गरेकै छन्।
यद्यपि यस महामारीको सफल सुपर-फास्ट अवसरको रूपमा काम गर्न सक्छ। यी कट्टरपन्थी उपायहरूमार्फत कि यो विखण्डन, सामूहिक चेतनाको शक्तिबाट उल्टाउन सकिन्छ। कोरोनाभाइरसको प्रभाव पर्यटन, यातायात, खुद्रा, फर्महरू, र स्वरोजगार जस्ता क्षेत्रहरूको अधिकताका लागि सम्भावित घातक छ। धेरै व्यवसायहरू पूर्ण रूपमा तत्कालको लागि बन्द हुनुपर्छ, यसको अर्को विकल्प छैन।
हो, तपाईले भन्नुभएकै हो- हाम्रो सरकार आएपछि सुतीसुती खान पाईन्छ भनेर। पैसा हुनेले त लकडाउन अघि नै खाद्यान्न थुपारेर सुतीसुती खाएकै होलान् तर दैनिकी निबेक गरेर जिवन गुजारा गर्नेहरुको बारेमा पनि केही सोच्नुहोस्। उनीहरु अहिले सबैभन्दा ठुलो मारमा परेका छन्। कोभिड-१९ भन्दा भोकमरीले मानिस मरेको सुन्नुपर्ने दिन नआओस्।
यी उपायहरू प्रभावकारी हुन देशव्यापी रूपमा सरकार लागेर खट्नु र खटाउनु पर्ने हुन्छ। म नेपालको पूरै मेडिकल पेशाका साथीहरुलाई सलाम गर्छु जो एक असाधारण काम गरीरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत २१, २०७६, ०३:२९:००